Jona 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Jona chọrọ ịgbapụ n’ihu Jehova (1-3)
Jehova mere ka oké ifufe fee (4-6)
A chọpụtara na ọ bụ Jona kpatara nsogbu (7-13)
A tụbara Jona n’oké osimiri (14-16)
Nnukwu azụ̀ loro Jona (17)
1 Jehova gwara Jona*+ nwa Amitaị okwu, sị: 2 “Bilie, gaa Ninive+ bụ́ obodo ukwu ma kwusaara ndị bi na ya na a ga-ebibi ha n’ihi na anụla m ihe ọjọọ ndị ha na-eme.” 3 Ma, Jona biliri ka ọ gbaga Tashish kama ịga ozi Jehova dunyere ya. Ọ gawara Jọpa ma hụ otu ụgbọ mmiri na-aga Tashish. O wee kwụọ ụgwọ ma banye n’ime ya ka o soro ndị nọ na ya gaa Tashish, ka ọ gbapụ n’ihu Jehova. 4 Jehova mere ka oké ifufe fee n’oké osimiri ahụ. E wee nwee oké ebili mmiri n’oké osimiri ahụ nke na ọ fọrọ obere ka ụgbọ ahụ kpuo. 5 Ezigbo ụjọ jidere ndị na-arụ ọrụ n’ụgbọ ahụ nke na onye ọ bụla n’ime ha bidoro ịkpọku chi ya ka o nyere ha aka. Ha wee malite ịtụnye ihe ndị dị n’ụgbọ ahụ n’oké osimiri, ka ụgbọ ahụ ghara ịdị oké arọ.+ Ma Jona agaala n’ala ala ụgbọ ahụ, dinara ala na-ehi ezigbo ụra. 6 Onyeisi ụgbọ ahụ bịakwutere ya, sị ya: “Gịnị mere i ji na-ehi ụra? Bilie, kpọkuo chi gị! Ezi Chineke nwere ike imere anyị ebere, anyị aghara ịnwụ.”+ 7 Ha wee gwa ibe ha, sị: “Bịanụ ka anyị fee nza,+ ka anyị mata onye mere ọdachi a ji adakwasị anyị.” Ha wee fee nza, nza ahụ ama Jona.+ 8 Ha sịrị Jona: “Biko gwa anyị, ọ̀ bụ onye mere ọdachi a ji adakwasị anyị? Olee ọrụ ị na-arụ, oleekwa ebe i si bịa? Ebee bụ obodo gị, oleekwa ezinụlọ i si?” 9 O wee sị ha: “Abụ m onye Hibru. Ọ bụ Jehova Chineke nke eluigwe, Onye kere oké osimiri na elu ala, ka m na-atụ egwu.”* 10 Ndị ahụ na-arụ ọrụ n’ụgbọ ahụ wee tụkwuo egwu. Ha wee jụọ ya, sị: “Gịnị ka i mere?” (Ndị ahụ na-arụ ọrụ n’ụgbọ ahụ matara na ọ na-agbapụ n’ihu Jehova maka na ọ gwara ha.) 11 N’ihi ya, ha jụrụ ya, sị: “Gịnị ka anyị ga-eme gị ka oké osimiri a dajụọrọ anyị?” N’ihi na ebili mmiri nọ na-akakwu njọ. 12 Ọ sịrị ha: “Bulienụ m tụba n’oké osimiri a. Ọ ga-adajụrụ unu n’ihi na ama m na ọ bụ maka m ka oké ifufe a ji na-enye unu nsogbu.” 13 Ma ndị ahụ na-arụ ọrụ n’ụgbọ ahụ gbalịrị ịkwọrọ ụgbọ ahụ gaghachi n’elu ala. Ma, ha emelighị ya n’ihi na ebili mmiri nọ na-akakwu njọ n’oké osimiri ahụ gburugburu ha. 14 Ha wee kpọkuo Jehova, sị: “Biko, Jehova, biko, ka anyị ghara ịnwụ n’ihi nwoke a.* Ka ọbara onye na-emeghị ihe ọjọọ ghara ịdị n’isi anyị, ebe ọ bụ na i meela ihe masịrị gị, Jehova.” 15 Ha wee bulie Jona tụba ya n’oké osimiri ahụ, oké osimiri ahụ adajụọ. 16 Egwu Jehova jidere ha.+ Ha wee chụọrọ Jehova àjà, kwekwa ya nkwa. 17 Ma Jehova zigara otu nnukwu azụ̀ ka o loo Jona. Jona wee nọrọ n’afọ azụ̀ ahụ ụbọchị atọ, ehihie na abalị.+
^ Jona pụtara “Nduru.”
^ Ma ọ bụ “n’ihi mkpụrụ obi nwoke a.”